कल्पना खरेलको कथा ‘चर्तिकला’ युट्युबमा
सुनसान रातिको दस बजे । आकाशमा टह टह जुन लागिरहेको थियो ! मौन वातावरण ! फागुन महिना बशन्त ऋतुको आनन्दमय मौसम ! म र मेरी प्यारी जीवन संगीनी हामी दुवै एकै बिस्तरामा पल्टिरहेका थियौँ । बच्चाहरु पढ्न होस्टेलमा राखेकाले घरमा उनी र म मात्र थियौ । दिनभरी अफिसको कामको व्यस्तता ! बेलुका अर्थात् सुत्ने समयमा मोबाईलमा फेसबुक चलाउँदै थिएँ । उनी पनि अर्को कोल्टो फेरेर मोबाइलमा व्यस्त थिइन् । हामी दुवै आआफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै थियौँ ।
न म उनलाई प्रश्न गर्थें न उनी मलाई प्रश्न गर्थिन् । न हामीबिच घरव्यवहार र जिम्मेवारीको कुरा हुन्थ्य्यो । न त मायाप्रेम भावनाका कुरा । एकै बिस्तरामा तन छ तर मन त कहाँ कहाँ ? सधैँ यस्तै दिनचर्या चलिरह्यो । हामी दुवै फेसबुकको दुनियाँमा हराउन पुग्यौ ! लाईक र कमेन्ट ! हार्दिक बधाई ! हार्दिक श्रदान्जली ! मीठा मिठा च्याटको वार्तालब ! फेसबुकनै नसा जस्तो बन्यो ! धेरै समय पश्चात् उनले मलाई चासो नदिएको महसुस भयो ।
कता काता हामीबिचको दूरी टाढिएको जस्तो लाग्यो । एक दिन मैले अलि उनीप्रति समर्पित भाव देखाएँ । उनको निकटता पाउन उत्सुक व्यवहार जनाएँ । तर पनि उनीमा मप्रतिको चाहनामा कुनै फरक आएन । उनीले मलाई ईंगनोर गरेको महसुस गरे ! उनीमा किन एकाएक फरकपन आयो भनेर उनको मनोविज्ञान बुझ्ने कोसिस गरेँ । केही समय त पत्तै चलेन । एक दिन राती हामी दुवै संगै सुतिरहेको बेला उनी बाथरुम गईन् !
त्यसै समयमा उनको मोबाइलमा ट्याग गरेर म्यासेजको सङ्केत आयो । खै कसरी मेरो नजर उनको मोबाइलमा पर्यो । म्यासेजमा लेखिएको थियो । भोलि दिउँसो भेटौ है । त्यो म्यासेज प्रकाश नामको पुरुषको थियो । उनी बाथरुमबाट फर्किइन र पुनः मोबाइल चलाउन थालिन् । म मौन बसिरहेँ । केही समयमा उनी निदाइन् । कता कता शङ्का उब्जियो मेरो मनमा । उनको मोबाइल चेक गरेँ । म्यासेज सबै डिलिट गरिएको थियो । कुनै केही प्रमाण थिएन ।
को होला उनलाई भेट्न चाहने मान्छे । मनमा निक्कै खुल्दुली चलिरयो । रातभरिको निद्रा हराम भयो । बिहान भयो सधैँ झैँ दिनचर्या चल्यो । उनले भान्सामा गएर खाना पकाइन् ! म उठेर फ्रेस भएर अफिस जाने तयारी गरेँ । उनले खाना पस्किइन । दुबैले खाना खायौँ । म अफिसतिर लागेँ । तर अफिस नपुग्दै आधा बाटोबाट फर्किएँ । म्यासेजमा आज उनलाई भेट्ने मानिस को होला भन्ने जिज्ञासाले सताइरहेको थियो । घरको नजिक बसेर चियो गरिरहेँ ।
उनी निक्कै प्रफुल्ल मुडमा मेकअपमा सजिएर घरबाट निस्किइन । मैले उनको पिछा गरेँ । केही पर उनी एउटा घरमा पसिन् । त्यस घरमा घरबेटी रहेनछ । हरेक कोठाहरुमा पढ्ने विद्यार्थीहरु बस्ने रहेछन् ! त्यस मध्य २४,२५ वर्षको एक युवक संग उनको चक्कर चलिरहेको रहेछ । उनीभन्दा दस वर्ष कान्छो । म अफिस गएको बेलामा उनीहरुको अधिकांस भेट हुने रहेछ । पाप धुरीबाट काराउँछ भने जस्तै झ्याल लगाए पनि झ्यालको चरबाट भित्रको दृष्य स्पष्ट देखियो । म झ्यालको चर बाट चियाउँदै थिएँ । दुवै सर्वाङ्ग नग्न आवस्थामा जवानीको मदहोसमा रमाइरहेका । त्यो देखेर म आकाशबाट खसे जस्तो भएँ । क्रोधले दुबैलाई चट्ट काटेर हिडौँ जस्तो भयो ।
Disabled Dad & Daughter
पत्रकार बाँस्कोटाको ढुङ्गाको प्रेमको लोकार्पण
झापामा साहित्य कला संस्कृति प्रतिष्ठानको स्थापना
दशैँको मुखैमा बनमा घाँस काट्न गएका २५ वर्षीय दिनेश सदाका लागि अस्ताए
स्रष्टा लेखनाथ पोखरेलको कथासंग्रह ‘मार्बल हाउसकी शालिनी’ पाठकमाझ